बुधवार, अगस्त 10, 2005 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 Douglas Karr
म मेरो अनुसरण गर्न चाहेको छु खुला = वृद्धि केहि समयका लागि पोष्ट गर्नुहोस्। त्यो पोस्टमा वर्णन गरिएको सफलताको सम्भावना हो जब मानिसहरू आफ्ना समाधानहरू अन्य समाधानहरूमा कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। यसमा एक फ्लिप पक्ष छ, र त्यो कम्पनीहरूले उनीहरूको समाधानको कार्यक्षमता सीमित गर्नका लागि कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कोरमा। उत्पादनहरू, सेवाहरू, र सुविधाहरूको भरपर्दो जोखिम खतरनाक हुन सक्छ।
प्रोग्रामरहरूले यसलाई कल गर्छन्छिर्न'।
'क्रिम्प' हरेक विकासकर्ताको दुःस्वप्न हो। यो तब हुन्छ जब एक ठोस विकास योजना मर्मत गरिएको छैन र पालन गरिएको हुँदैन। सुविधाहरू जारी भित्र छिर्न जब सम्म परियोजना यति टाढा नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ कि यो कहिले पनि समाप्त हुँदैन। वा नराम्रो, यो समाप्त हुन्छ र बगहरूको एक दुर्गम मात्रा छ।
म पेश गर्नेछु कि कम्पनीहरू, र उनीहरूका उत्पादनहरू र सेवाहरू पनि पीडित हुन सक्छन् 'छिर्न'। तपाईंको कम्पनी र उत्पादनहरू र तपाईंको मुख्य व्यवसायको सेवाहरू सीमित नगरी, तपाईं इन्द्रेणीहरू पीछा गर्न थाल्नुहुन्छ, यहाँ एक पैसाको हो वा हो भनेर सोच्दै। यद्यपि तपाईको व्यापारमा फोकस, तपाईका कर्मचारीको फोकस र ज्ञान, साथै जोडिएको तनाव, यसले उत्पादन, समर्थन, डेलिभरी, आदिमा पार्ने क्षति देख्न तपाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ।
जब तपाईं थप उत्पादनहरू, सेवाहरू, वा सुविधाहरू हेर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ कुनै कम्पनी छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस् जुन उनीहरूको व्यवसायको मुख्य अंशको रूपमा रहेको छ। के तपाईं ती भन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईंको कम्पनीले त्यसलाई समर्थन गर्न सक्छ र तपाईंको कोरमा विशेषज्ञता कायम राख्न जारी राख्न सक्छ? के तपाइँका कर्मचारीहरु यसलाई समर्थन गर्न चाहानुहुन्छ?
अन्त्यमा, इन्द्रेणीको पछि लाग्दा तपाईले केवल ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ।
टैग: अनुप्रयोग विकासछिर्नसुविधा क्रिम्पविशेषताहरुथोरैसरल